Raha miaina amin'ny vanim-potoanan'ny hypodynamia ianao, dia afaka, raha tsy mifidy, dia mifaly amin'ny asan'ny motera. Raha tsy manana ny fotoana / faniriana / vola ho an'ny fanatanjahan-tena ao amin'ny foibem-pandriana ianao, ny dobo filomanosana , ny fividianana bisikileta, ny fanoratana ao amin'ny fizarana fanatanjahan-tena, ho an'ny fahaverezan'ny vatanao afaka mampiasa fanabeazana ara-batana. Minoa Ahy, na ny sekoly fianarana ara-panabeazana aza dia ho hitan'ny vatanao ho toy ny peratra ho an'ny lehilahy iray maty.
Niezaka mafy izahay mba hampiavaka ny fanabeazana ara-batana sy ara-panatanjahantena (na hampisarahanay izany - miankina amin'ny fomba maha-olona sy ny hatsaram-panahin'ny mpampianatra ara-panabeazana) nandritra ny taom-pianarana. Tadidiko tamin'izany, nitady ny fahafahana handeha izahay, nahazo mari-pankasitrahana "noho ny antony ara-pahasalamana", ary nanao izay rehetra azoko natao mba hahazoana antoka fa "mahafa-po" ny fidirana ao amin'ny log amin'ny marika. Ary ny zavatra mahatsiravina indrindra dia ny mampitombo ny tetezana amin'ny fihetsika ary miditra ao amin'ny vondrona momba ny fanabeazana ara-pahasalamana ara-pahasalamana.
Ary ankehitriny dia tsy maninona isika, fa tsy misy fotoana ...
Raha mbola mahita 30 minitra maimaim-poana ianao, dia mandany ny fanabeazana ara-batana manaraka amin'ny rivotra - dia ho avo kokoa ny vokatra.
Ny tongony dia ny hatevin'ny soroka, ny lohalika dia tapaka ny sandry, mihantona ny tanany. Manao ny dingana arahina mankany amin'ny ankavanana sy ny ankavia isika, raha mikisaka mankany ankavia, manandratra ny soroka havanana amin'ny sofina, raha mihodina miankavia - ny ilany havia. Manatontosa ny zava-drehetra amin'ny dingana mirindra izahay, aorian'ny famerimberenana folo dia mandalo amin'ny fiakarana ny soroka roa miaraka amin'ny fotoana iray ihany.
Mivezivezy eo amin'ny tongotray izahay, mihodinkodina ary mandohalika ny lohalinay, manangana ny tananay havanana eo ambonin'ny lohanay, mametraka ny tananay havia eo amin'ny fononay, ary atodiho ny tananay havia eo an-dohanay, ny tànana havanana amin'ny taolantsika. Manao fiandrasana 8 isika, ary manohy mamelatra eo amin'ny tongotra, ary manosika ny tanana mankany amin'ny avo indrindra amin'ny tratrany - miandrandra amin'ny lamosin'ny vatana avy eo ankavia ary avy eo ny tanana havanana.
Mandeha amin'ny toerana - mamelona ny fofona. Manaisotra tanteraka ny tongotra hiala amin'ny tany, tsy manadino ny fihetsik'ireo tanana.
Mialà sasatra kely - atsofohy amin'ny tongotra havanana, hikotehanao, haka ny havia havia havanana. Dia makà dingana amin'ny lafiny iray miaraka amin'ny tongotra havia, hikolokolo, manainga ny tongotra havanana. Rehefa mandohalika ny lohalika dia manangana ny tanantsika amin'ny andaniny roa isika, eo amin'ny fanamafisana - miara-mijoro eo anoloan'ny vatany. Miverina in-8 isika, avy eo manatsara sy manatanteraka 8 imbetsaka.
Mijanona ny dingana, manampy tanana isika - amin'ny hetsika mankany amin'ny ilany, ny tanana natsangana amin'ny lanjan'ny soritra, dia nisara-panambadiana, eo am-pelatanana ny tongotra - ny tanana dia miondrika eo anoloan'ny tratra.
Atsaharo ny fofon'aina - atsangano eo amin'ny toerany, atsangano ny tanana - manaikitra, manafina - manafatra.
Ny tongotra eo amin'ny soratry ny soroka - alefantsika ny lanjan'ny vatantsika mankany amin'ny tongotra havia (mihintsana ny tongotra havia, ny tongotra havanana) dia mizara ny lanjany amin'ny vatany (ny tendron-kavina roa), ny lanjan'ny vatana eo amin'ny tongotra havanana (ny farany havanana, ny sisiny havia), ary ny fandaniana amin'ny efatra - manitsy ny tongotra.
Manaraka ny sisiny izahay - ny havoana miankavia, ny sandry havanana eo ambonin'ny lohany, ny tanana havia dia atosika amin'ny vatany, ny tongotra dia miorina, miala amin'ny foibe isika - ny lamosina dia mahitsy, ny sandry dia misaraka amin'ny sisiny, ny fironana eo ankavanana dia ny tanana havia eo an-tampon-doha, ny havanana dia atosika amin'ny vatana. Avy eo dia araho ireo onja, manova azy ireo amin'ny fivoahana mankany amin'ny IP, ary ny havoana havanana sy havia.
Sakafo sy fampiasana ny fahaverezan'ny lanja
Ahoana no hitiavanao ny vatanao?
Fitaovana ilaina ho an'ny toekarena - inona no safidy?
Fahasamihafana malemy - fitsaboana sy fitsaboana amin'ny fitsaboana amin'ny olona
Statins ho an'ny fihenan'ny koloroola
Ny levenan'ny brewer noho ny fahaverezan'ny fahavoazana
Inona no homena ny rafozambaviny?
Hividy salope an-davaka - recipe
Vita amin'ny trano vita amin'ny hazo iray - inona no fitaovana tena malaza?